Madaxweyne Mugabe oo doorasha barri hadal lama filaan ka sheegay | Saxil News Network
Image captionMadaxweynihi hore ee Zimbabwe Robert Mugabe oo sheegay inuu u codeyneyn Emmerson Mnangagwa
Madaxweynihi hore ee dalkaasi Zimbabwe Robert Mugabe ayaa shir jaraa’id oo lama filaan oo uu qabtay ka sheegay iyada oo cod bixinta maalin un ay ka harsan tahay.
Mr Mugabe wuxuu sheegay inuusan taageereyn ninka xilka ka qaaday oo ku tartamaya magaca xisbiga isaga uu sameeyey ee Zanu PF, Emmerson Mnangagwa, maadaamaa uu xoog iiga qaaday xafiiski aan anigu sameeyey.
“codkeyga ma siin doono oo waxaan doorashada Isniinta dhaceyso codkeyga siin doonaa 22 musharrax ee kale musharraxa aan ka doorto.”
Shacabka dalkaasi Zimbabwe waxay codbixinta u dareerayaan maalinta Isniinta doorashadan oo noqoneyso tii ugu horreysay oo dhacda tani iyo marka xilka laga qaday Mr Mugabe bishi November.
Muxuu yiri Mr Mugabe?
Mr Mugabe oo gurigiisa ku yaalla magaalada harare ku yaalla kula hadlay warbaahinta ayaa wuxuu markale sheegay, “in la afgambiyey”, rag saraakiil ah oo ciidamada ka tirsan iney afgambiyeen xilkana uu isaga dagay “si dalka uu dagaal uga dhicin.”
Wuxuuna intaa ku daray “inuu taageerayo musharraxa xisbiga mucaaradka ee MDC Nelson Chamisa, inuu codkiisa siiyo maalinta Isniinta.”
“Waxaanna rajeeynayaa ayuu yiri in isaga la doorto, haddii isaga la doortana aniga sidaa ayaan raalli ku ahaanayaa.”
Mar wariyaha BBC Fergal Keane mar uu weydiiyey musharraxa mucaaradka xisbiga MDC inuu talada dalka Zimbabwe qabto iyo inkale Mugabe wuxuu ku jawaabay, Nelson inuu yahay musharraxa keli ah ee musharraxnimo u qlma.
Mr Mugabe wuxuu yiri: “Inuu rajeeynayo codbixinta barri dhaceyso iney xoori doonto kalsoonida maamulka militariga uu dhisay loo qabo, lana soo celinayo nidaamka dastuuriga ahaa.”
“Barrito waa maalin weyn oo ay shacabku ku caddeeynayaan ineysan mardambe dooneynin iney arkaan tallaabbada ay militariga qaadeen mid la mid ah, hal qofna lagu aamino talada dalka.”
Image captionRobert Mugabe iyo xaaskiisa Grace Mugabe
Image captionMr Mugabe wxuu yiri Nelson ee ah musharraxa xisbiga mucaaradka MDF inuu yahay musharraxa keli ah ee musharraxnimada u qlma
Mr Mugabe wuxuu sida oo kale diiday inuu doonayey inuu xilka uu ku wareejin rabay xaaskiisa, Grace, arrintaasi oo uu ku tilmaamay hadal bila macni ah oo aan suuragal ahayn wuxuuna ku talabixiyey inuu kaga habboon wasiirki hore ee gaashaan dhigga Sydney Sekeramayi.
Mr Mugabe wuxuu intaasi ku daray, tani iyo marki xilka laga qaaday sanadki hore, “ineysan shacabka Zimbabwe xor ahayn”.
Tirada doorashada la xidhiidha
10,985 oo goob doorasho ayaa la diyaariyey
16 sano kaddib waxa marki ugu horreysay doorashada goob joog ka noqonaya, goob joogayaal ka socda Midowga Yurub iyo Mareykanka.